Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale 1.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale
Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိုးသည်းထန်စွာလက်နက်ရှည်များကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ဒိုင်နိုဆော၏နောက်ကျောအပေါ်စီးနှင့်မိုဘိုင်းများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့နဲစစ်တိုက် Royale ဂိမ်းရပ်နေသည်ကိုပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းဖြစ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း,
မိုဘိုင်းအတွက် ** Battle Royal **
Dino Royale ရှုထောင့်ဟာကိုသွားမိုဘိုင်းကစားထိုသို့စုံလင်သောအောင်အတိုချုပ် 3-5 မိနစ်ပွဲအတွက်ကစားနေတဲ့ထိပ်ကနေကြည့်ရှုအားပေးမယ့် PvP စစ်တိုက် Royale ဂိမ်းကိုဆင်းပါ! Dino Royale သင့်ရဲ့ဂီယာအပေါငျးတို့သနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်မျက်နှာပြင်စာရင်း system ပေါ်တွင်ရိုးရှင်းသောနှင့်အတူပစ်ကပ်ကို dual ချောင်းကိုထိန်းချုပ်မှုရန်လွယ်ကူပါရှိပါတယ်။
** တွေ့ရှိချက်များကိုလက်နက်နှင့်သံချပ်ကာ **
သေနတ်များ! သံချပ်ကာ! သေနတ်များ! Medpack! အကောင်းဆုံးကိုပြန်ပေးလော့များအတွက်မြေပုံရှာရန်နှင့်ကျစ်ဘေ့စ်ဘောလင်းနို့ကနေလက်ပစ်ဗုံး launcher မှဓါးပစ်အထိအရူးလက်နက်များတပ်ဆင်! ခမောက်များနှင့်အခြားလက်နက်ကိုအပိုင်းပိုင်း၌သင်တို့၏အကျင့်စရိုက်ထပ်တိုးခြင်းဖြင့်လျော့နည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုယူပါ။ ကျန်းမာရေးနိမ့်တဲ့အခါ Med-pack ကိုအတူတက်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ။
** စီးနငျးတိုကျခိုကျဒိုင်နိုဆော **
တစ်ဦး triceratops ၏နောက်ကျောအပေါ်ဤနေရာသို့သွားရန်နှင့်ယှဉ်ပြိုင် Ram ။ ဒါမှမဟုတ်အလျင်အမြန်မြေပုံန်းကျင် get နှင့် velociraptor သုံးပြီးမြန်နှုန်းနှင့်အတူတိုက်ခိုက်ရန်။ သို့မဟုတ်ရှငျဘုရငျကို Dino, T-Rex အဖြစ်သင့်သည်းရန်သူများကိုက်စားခြင်း, ပစ်ခတ်မှုအစဉ်အမြဲအဖြေမဟုတ်ပါဘူး - တခါတရံတွင်သင်သည်သင်၏သွားများကိုအသုံးပြုဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်!
** EPIC Battle သည့် MAP **
မုန်တိုင်းသင်တို့နှင့်အတူအဖွင့်အမီလိုက်မသွားပါစေနဲ့! အဆောက်အဦး၏အတွင်းနှင့်ထွက် duck, ဥမင်၌ပုန်းရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မြတ်သောအောက်မှာဖုံးယူပါ။ Dino Royale ရဲ့ကြီးမားမြေပုံနှင့်မတူညီမြေပြင်အနေအထားအမျိုးမျိုးတန်ချိန်နှင့်နည်းဗျူဟာအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့လုပ်ရမည်။
** intensive Gameplay **
အွန်လိုင်းလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစစ်မှန်သောလူတို့တဘက်၌ Play သို့မဟုတ်တက်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း mode မှာ bot တွေဟာဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ။ ဆိုပြီးအတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူစစ်တိုက်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တော်အတွက်တစ်ဦးတည်းကသွားပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ outlast - သင်တိုက်ဖျက်ဖို့ပေမယ့်သင်တဦးတည်းအရာသတိရရမယ်ချင်သလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်!
Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
bigappstorezz စတိုး 1 1.4k
Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Wizard Games Incorporated
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.wizardgames.ca/privacy
လက်မှတ် SHA1: DB:9C:96:CB:97:5F:28:59:B3:78:AB:BA:32:04:83:2D:E5:E9:44:41
အဖွဲ့အစည်း (O): Wizard Games Inc
Dinos Royale - Savage Multiplayer Battle Royale APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ